Xiddiga reer Senegal Sadio Mane oo wax u celiyey tuuladii uu ka soo jeeday si nolosha dadka… – Hagaag.com
Posted on 16 Febraayo 2020 by Admin in Sports // 0 Comments
Xiddiga heerka caalami ee dalka Senegal Sadio Mane – oo ah xirfadle u ciyaara Liverpool ayaa tusaale u noqday daacadnimada dadka tuuladiisa uu ku soo barbaaray, sidaa darteed markii uu ku guuleystay abaalmarinta ciyaaryahanka ugu fiican qaaradda Afrika sanadkii hore ee 2019, wuxuu ka xumaa inuusan u safrin inuu u dabaaldego horyaalkii ugu horreeyay taariikhdiisa.
Mani, oo 27 jir ah, wuxuu ku koray tuulo yar oo la yiraahdo Sidio, oo ku taal Webiga Casamance ee koonfurta Senegal.Wuxuu dhashay 1992 oo ka dhashay qoys aad u xiiseeya wacitaanka Islaamka halka aabihiis uu ahaa imaamka masjidka tuulada.
Xiisaha warbaahinta caalamiga ah ee Mani ayaa sii kordhay ka dib markii uu si wanaagsan ula shaqeeyay Liverpool oo loo caleemo saaray inuu yahay xiddiga ugu wanaagsan qaarada Afrika, kanaalka Faransiiska ee “Canal Plus” wuxuu kormeeray qeybo ka mid ah noloshiisa filim ah oo “lagu sameeyay Senegal”.
Mani wuxuu ka sheekeeyay geerida aabihiis 1999, isagoo ku sifeeyay murugo weyn, asagoo sheegay inuu helay warka dhimashada markii uu jiray 7 sano oo kaliya, wuxuu ku ciyaarayay wadada, walaalkiisa ayaa usheegay geerida aabahood sababtoo aheyd asaga oo la il darnaa calool xanuun, waxaana loo wareejiyay isbitaal fog, maadaama aysan jirin Isbitaalo ku yaal tuuladooda.
Ka dib qiyaastii 19 sano, Mani ma iloobin geerida aabihiis sababtuna waa isbitaal la’aanta ka jirtay tuuladiisa, sidaa darteed wuxuu u dhisay isbitaal tuulada, sidoo kale wuxuu dhisay masjid, wuxuu dayactirey iskuulkii hore ee tuulada, xataa wuxuu gacan ka geystay hagaajinta nolosha jiilka mustaqbalka ee meesha uu ka soo jeedo, marka lagu daro taageerada joogtada ah ee dhaqaale ee uu siiyo masaakiinta.
Mani aabihiis waa loo diidey fursad ah in lagu aaso tuuladiisa sababta oo aheyd joogitaanka kooxo kacdoon ka waday dalka waqtigaas oo ka hor istaagey in halkaasi lagu aaso, waxaana lagu aasay meel u dhow isbitaalka uu ku dhintey.
In kasta oo uu dhintay aabihiis ku dhawaad ​​labaatan sano ka hor, haddana waxaa saameyn ku yeeshay edebtiisa imaamka masjidka tuulada, wuxuuna noqday mid ka mid ah xiddigihii ugu islaweynida yar inkasta oo uu xaqiiqda gaaray heerka ugu sarreeya ee kubadda cagta Afrika isla markaana noqday mid ka mid ah xiddigihii dunida ugu caansanaa ee garoomada wareegsan.